Multilayer PCB, rigid 8 layers printed board. 8 layers PCB with Kapton tape , FR4 TG150 ENIG 2U "ရှန်ကျန်းအတွက် PCB အမြင့်တိက�တောင့်တင်းသောွအလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့လ�Kapton တိပ်နှင့်အတူအလွှာ PCB��ပ်ငန်း - တရုတ် Multilayer PCB, rigid 8 layers printed board. 8 layers PCB with Kapton tape , FR4 TG150 ENIG 2U "ရှန်ကျန်းပေးသွင်းအတွက် PCB အမြင့်တိကျစွာ PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း,စက်ရုံ -WMD
Multilayer PCB, တောင့်တင်းသော 8 အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့. 8 Kapton တိပ်နှင့်အတူအလွှာ PCB , FR4 TG150 ENIG 2U "ရှန်ကျန်းအတွက် PCB အမြင့်တိကျစွာ PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
လေဟာနယ် အထုပ်, 10pnl / အိတ်,ပျဉ်ပြားအကြားစက္ကူ
8 အလွှာ FR4 TG150 အစိမ်းရောင်
Sigle အရွယ်အစား: 145*185MM
8 Kapton တိပ်နှင့်အတူအလွှာ
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, panel ကိုအရွယ်အစား 97 * 174.8MM / 3up, ပြားအဖြစ်သင်္ဘော, 1.5မီလီမီတာ - 1 အောင်စ - 8 အလွှာ - FR4 150Tg, အစိမ်းရောင်ဂဟေဆက် gloss x ကိုတှနျးလှနျ 2, အဘယ်သူမျှမဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, ENIG 2U ". ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 8, IPC CLASS 2, အားလုံး soldermask ဆည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်.
နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ kapton တိပ်နှင့် ENIG 2U "နဲ့ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, နှစ်ဆခြမ်းဘုတ်အဖွဲ့, ဘုတ်အဖွဲ့ပုံနှိပ်တင်းကျပ်နှစ်ဖက်.2အလွှာ, 1.6မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့2ရှန်ကျန်းအတွက်အလွှာစံ PCB 2oz LF HASL pcb Quickturn PCB စက်ရုံ